Maitiro Ekuita A Anobudirira Mailer | ECommerce nhau
Maitiro ekugadzira yakabudirira banner kushambadzira
Jose Ignacio | | Email marketing, Marketing, Kutengeswa kweIndaneti
Vhura a ecommerce kana e-commerce inoda zvinhu zvakawandisa. Asi chimwe chakanyanya kukosha kugadzira kushambadza kuti uwane mari pazvishandiso zvese zvevashandisi. Inogona kuve sosi yemari yausina kutanga uye haizounze chero kudyara. Kunze kwekugadzirwa uye kugadzirisa, kunyangwe maitiro aya achigona kuitwawo nemakambani anoda kuisa kushambadza pawebhusaiti yeimba yako.
Parizvino, kushambadzira ndeimwe yedzidziso iyo inogona kunyanya kufarira kuvandudzwa kwehunyanzvi hwako dhizaini online. Asi zviri nyore kuti iwe usape mukana kune chero kushambadzira nekuti mune dzimwe nguva zvinogona kutokuvadza zvaunofarira uye zvinonyanya kunetsa, nyanzvi. Chero zvazviri, isu tiri kuzokudzidzisa iwe kubva kune aya chaiwo ekuita anotumira tsamba. Chingave chinhu chakakosha kwazvo uye chiri nani, unogona kuita kuti zviitwa izvi zvibatsire.
Ads ndeimwe yeanosarudzika midhiya kuti kubva izvozvi iwe ugowana kudzoka pane yako dijituru chirongwa. Hazvishamise kuti shambadziro yakabudirira inopa akateedzana ehunhu iwe aunofanira kufunga nezvayo kana uchifarira kuita ino yepamusoro yekutengesa zano pakati peavo vane basa rewebhusaiti. Tiri kuzokubatsira iwe kuzadzisa izvi zvinangwa nenzira yakapusa, ine musoro uye yakaenzana nzira. Iyi pfungwa here yatinokumbira kwauri izvozvi?
1 Shambadziro banner: maitiro ekuigadzira zvinobudirira
2 Gadzira yako pachako mireza
3 Zvimwe zvakakosha zvinhu zvekugadzira kushambadzira
4 Kushambadza kunofanirwa sei?
Shambadziro banner: maitiro ekuigadzira zvinobudirira
Rudzi rwekushambadzira shambadziro haisi diki diki pane peji rewebhu. Kana zvisiri, pane kudaro, inowana kukosha kwakakosha sekuzoona iwe kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti ivo vanokwanisa kukuita iwe kuti usvike kune hombe nhamba yevanhu vanoisa mari shoma shoma zviwanikwa uye kuwana yakanyanya kuwanda mukana mabhenefiti. Kuburikidza nenzira dzakasiyana mukushambadzira kwemazuva ano. Iwe unoda here kuziva zvimwe zvakakosha kwazvo?
Kushambadzira paminjini yekutsvaga
Iyo ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nevazhinji vashandisi. Nekuti mukuita, vanokutendera kuti uwane mafomati ekushambadzira ayo akagadzirwa kare uye aine akakosha emhando dzekutengesa Kuburikidza nemajini ekutsvaga akakosha seGoogle anogona kunge ari izvozvi. Kubatsira kukuru kwekuita iyi shambadziro system kunogara muchokwadi icho icho iyi mhando yezviziviso bvumidza iwe kuti uvandudze kuiswa kwewebsite yako kuburikidza nekushambadzira kwakabhadharwa. Rudzi urwu rwekushambadzira runowanzo shanda kuburikidza nemubhadharo pakukanda (PPC); Mune mamwe mazwi, iwe unongobhadhara yega yega kudzvanya kunoitwa pane yako kushambadzira. Saka iwe unofarira kuvimbika kukuru kubva kune vatengi kana vashandisi.
Zvemagariro enhau kushambadzira
Icho chaicho chiri chazvino kuitika muchikamu uye mune dzakawanda zviitiko ivo vanokupa iwe chaiyo mukana wekugadzira kushambadzira pamapuratifomu avo. Semuenzaniso, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram kana YouTube. Yakaumbwa chikamu chehurongwa hwebhizinesi kusimudzira bhizinesi rako pamhepo. Iyo ine mukana wekuti iri rinonyanya kuchinjika kudyara system ine yekupinda mukana iyo inopfuura yakakosha.
Gadzira yako pachako mireza
Mireza ingangove iyo inonyanya kufarirwa fomu yekushambadzira pamhepo uye kune hukuru hukuru hwakawanda hwaunoona pamapeji ewebhu hunobva pane aya mafomati. Ivo vechinyakare-vechinyakare, asi hongu ivo vachiri anoshanda kwazvo muzvinangwa zvavanoteedzera. Iyo inosanganisira yekuisa kushambadzira kwemhando dzakasiyana, saizi uye dhizaini pane yakasarudzika saiti mukati mewebhu peji.
Iko mukana weiyi sisitimu ndeyekuti iwe unogona kuzvigadzira iwe pachako uye wozvigadzirisa kune izvo zvido zvewebsite yako. Nemaitiro akasiyana siyana zvichienderana nekuwanika, zviwanikwa zvehunyanzvi uye kukwidziridzwa kwaunoda kupa kune aya mameseji. Chero zvazvingaitika, ndiyo mhinduro yepedyo yaunofanira kugutsa ichi chinodiwa chinomuka muhukama hwako nebazi rekushambadzira.
Muzviitiko zvese zvakafumurwa, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekutarisa kugadzirwa. Izvi zvinorevei chaizvo? Zvakanaka, chimwe chinhu chakareruka pakutanga kuona sezvaunofanirwa kutanga, panguva ino, zvaunoda gadzira shambadziro yako. Kana dambudziko iri ragadziriswa, iwe unenge wakwanisa kuita mushambadzi unobudirira. Izvi zviri nyore, asi panguva imwechete zvakaoma. Usakanganwe kana iwe uri kutarisana neiyi nyanzvi mamiriro.
Zvimwe zvakakosha zvinhu zvekugadzira kushambadzira
Pamwe iwe wave kutogaya zvishoma maitiro ekugadzira kushambadza kubva zvino zvichienda mberi. Asi usati waita kudaro, zvichave zvakakosha kuti iwe uzive kuti ndiani anonanga kushambadzira kwako, uye kunyanya ongorora zvinoitwa nemakwikwi ako mune izvi. Dzidza zvinoitwa nevamwe vanhu vari zvakare shanda mubhizinesi rako redhijitari niche kuitira kuti nenzira iyi iwe ugone kuona zviri kudzokororwa uye izvo zvichiri kushayikwa mumusika iwoyo. Ndiyo imwe yekiyi yekuendesa iyi nyaya zvinobudirira.
Nepo kune rumwe rutivi, zvichagara zvichinyanya kukosha kuti utore mhando iyi yekuita uine hukuru hukuru. Sezvo mune ino pfungwa, kana iwe uri wekugadzira uye uine iyo yerudzi rwepfungwa, zvirinani zvirinani, nekuti chigadzirwa chako chinenge chiri chepakutanga zvachose.
Vhura meseji mune chero kushambadzira kunyatsoratidza inogara iri zano rinotungamira mukubudirira. Nekuti pakupera kwezuva ndezvekuratidza kuti vamwe vanokuona iwe kuti unokwanisa kuvhura meseji yekutanga kune vateereri. Uye izvi hapana mubvunzo kuti inofanirwa kuve ine hunyanzvi, yekugadzira, inoratidzira uye kuti inokwezva vangangove vatengi kana vashandisi. Ichave pasipoti iyo inokutora iwe kuenda munzira yekubudirira mune rako basa rekugadzira kushambadzira pane rako bhizinesi redhijitari kana webhusaiti.
Kushambadza kunofanirwa sei?
Ehezve, mafomati aunosarudza anoenderana nevateereri vako, saka unofanirwa kufunga nezvenzira dzekutaurirana dzinonyanya kukosha kuti uise pane yako saiti. Asi usafunge kuti kune imwechete fomula yekuisa mukuita. Kana zvisina kudaro, pane kudaro, iwe unokwanisa kusarudza kuti vangani vaunofunga kuti zvakakosha. Kune rimwe divi, ichave iri nguva yaunofanirwawo kuongorora iyo mari yakatorwa muchiito ichi mune yekushambadzira chikamu kuti nenzira iyi iwe ugone kusarudza fomati inokodzera zvakanyanya rako rebhajeti rehunyanzvi.
Asi muchokwadi, kushambadzira kwauchazopinza kunofanirwa kunge kuri sei? Ehezve, iwe unofanirwa kuunganidza akateedzana ezvakakosha zvipo izvo zvisingazomboshayikwa kana uchifunga nezveiyi nzira yekutengesa pane webhusaiti yebhizinesi rako redhijitari Chero zvazvingaitika, tiri kukunyorera pasi mamwe mazano kuitira kuti ugone kuzviisa mukushandisa kubva zvino zvichienda mberi. Semuenzaniso, iwo atinokufumura pazasi:
Kushambadzira hakufanirwe hapana nguva inopesana. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kuremekedza kodzero dzevashandisi.
La mhando mune mafomati Icho chiwedzerwa kukosha icho chinogona kunyange kugadzirisa dhizaini yewebhusaiti. Iwe haugone kuregeredza aesthetic chimiro chechero dhijitari fomati, kunyangwe kana zviri izvo kushambadza ivo pachavo.
Hapana mubvunzo kuti kushambadza kunofanirwa kuve kwakabatana neiyo chikamu chaunoita: fashoni, tsika nemagariro, hunyanzvi hutsva kana imwe nhevedzano yezvigadzirwa kana masevhisi.
Iwe haufanire kusanganisira mafomati ari chaizvo inopinda kana izvo zvinogona kukuvadza mufananidzo wako mukati mechikamu. Iwe unofanirwa kusabvisa mareferenzi ekubhejera, doro, fodya kana zvimwe zvigadzirwa zvine mufananidzo wakashata wemagariro.
Izvo zvakakosha kuti toni dzinogona kuva mukwanisi ine kumashure kwewebhu peji rako. Saka kuti nenzira iyi mhedzisiro yacho ine simba zvakanyanya pakati pevashandisi kana vatengi.
Zviziviso zve makuru ekutengesa zvigadzirwa vanogara vachipa mbiri kumakambani anotarisira kuratidza mafomati aya. Kana uchikwanisa, tsamira kune ino zano kuti igone kukanganisa bhizinesi rako kubva zvino zvichienda mberi.
Uye pakupedzisira, usakanganwa kuti hazvina kunyatso kunaka kuti webhusaiti yako izere neaya maratidziro enhau. Hazvishamise kuti mhedzisiro yacho inogona kukukuvadza zvakakomba muzvinangwa zvaunoteedzera. Mashoma kushambadza uye mhando yepamusoro zviri nani iyo yakawanda uye yekukahadzika kuravira.
Sezvawaona, iwe une akawanda manejimendi mamodheru anowanikwa ekugadzirisa iyi yekutengesa chikamu pawebhusaiti. Iko kwese iwe kwaunofanirwa kuita ikozvino nerufaro kuyedza kuita kuti iro basa rehunyanzvi ribatsire kubva pakutanga. Pakutanga zvinogona kukubhadharira zvishoma, asi pamusoro pemakore unoona mafambiro aunoita nehunyanzvi.
Izvo hazvisi kuti iwe uchazowana raramo nekushambadzira, asi rubatsiro rwemari harukuvadze chero munhu, ndoda muchidimbu chikamu. Kusvika padanho rekuti inogona kukupa iwe yakanaka yakanaka kushamisika kubva ikozvino zvichienda mberi. Sei usingaedze kuzviita mune rako reunyanzvi chirongwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Maitiro ekugadzira yakabudirira banner kushambadzira
Chii chinonzi Facebook Bhizinesi uye chingabatsira sei ecommerce?
Ecommerce inobhadhara sei mutero?